IHuawei ibhengeza ukuhanjiswa kweTekhnoloji ye-GPU Turbo kunye noluhlu lwezixhobo eziXhaswayo I-Androidsis
IHuawei ibhengeza ukuhanjiswa kwetekhnoloji ye-GPU Turbo kunye noluhlu lwezixhobo eziza kuxhaswa
U-Huawei ubhengeze itekhnoloji ye-GPU Turbo ekuqaleni kwale nyanga. Ngokusekwe kwisoftware kunye nokusebenza kwehardware, obu buchwephesha bunokuphucula ukusebenza kwemizobo ye-smartphone ngama-60 epesenti ngelixa kunciphisa ukusetyenziswa kwamandla ngeepesenti ezingama-30.
Ukusukela oko kwabhengezwa obu buchwephesha, inkampani yaseTshayina yaqinisekisa ukuba itekhnoloji iya kufumaneka kwiiHuawei ezininzi kunye nezixhobo zeHonor ngohlaziyo lwesoftware. Namhlanje, inkampani ilandele oko ikuthethileyo kwaye yaqinisekisa ishedyuli yokuphuma kwetekhnoloji ye-GPU Turbo. Ikwatyhile uluhlu lwezixhobo eziya kuhambelana nolu hlaziyo.
Nangona iiterminal ezininzi ziya kushiywa ngaphandle kolu hlaziyo, IHuawei P20, P20 Pro, Mate 10, Mate Pro kunye neMate RS ziya kufumana uhlaziyo ngo-Agasti olandelayo kwimimandla enjengeYurophu, iRussia, iAsia Pacific, uMbindi Mpuma kunye neAfrika.. Kumazwe onke kunye namazwekazi, kuya kufuneka silinde isibhengezo esenziwe nguHuawei kunye neMbeko.
IHuawei izakuzisa uhlaziyo kwezinye iifowuni zeHuawei ezinje ngeHuawei P Smart, iNova 2i, iMate 10, iLite kunye neY9 (2018) kuzo zonke iimarike ngoSeptemba., kunye neHuawei Mate 9, Mate 9 Pro, P10 Plus kunye nabanini be-P10 kuyo yonke imimandla baya kufumana uhlaziyo ngoNovemba 2018. Ukongeza, abanini beHuawei P20 Lite kuzo zonke iimarike ezichazwe apha ngasentla, ngaphandle kweRussia, baya kufumana uhlaziyo. uhlaziyo ngoSeptemba.
Imbeko iya kufumana iGPU Turbo
Hlonipha abasebenzisi abali-10 eYurophu, eRashiya, eAsia Pacific, eIndiya naseMbindi Mpuma ukufumana iGPU Turbo ngo-Agasti. I-Honor 9 Lite kunye ne-Honor V10 yale mimandla ikhankanyiweyo iya kufumana uhlaziyo ngoSeptemba. Imbeko i-7X iya kuphuculwa iye kwi-GPU Turbo ngo-Septemba, kunye nabanini beHonor 8 Pro kunye neNhlonipho yeefowuni ezili-9 baya kufumana ukuhlaziywa ngoNovemba.
Itekhnoloji ye-GPU Turbo ngoku iyafumaneka kwii-smartphones Ukudlala iMbeko kunye neNhlonipho 9i. Inguqulelo yayo ye-beta ngoku iyafumaneka kwii-smartphones ezinje ngeHuawei P20, iP20 Pro kunye neNhlonipho 10.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei ibhengeza ukuhanjiswa kwetekhnoloji ye-GPU Turbo kunye noluhlu lwezixhobo eziza kuxhaswa
Ungabathulisa njani abasebenzisi bencoko yeqela kwi-WhatsApp: yintoni entsha kwinkqubo yemiyalezo
Amabali e-Instagram afikelela kwizigidi ezingama-400 zabasebenzisi bemihla ngemihla kwaye azisa isincamathelisi somculo